गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा नगरपालिका भवन उद्घाटन - Jagaran Post
जागरण पोस्ट ५ श्रावण २०७८, मंगलवार १०:४४
नवलपरासी : नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिकाको नयाँ सुविधासम्पन्न भवन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गरेका छन् । मध्यविन्दु-७ चोरमारामा निर्माण गरिएको प्रशासनिक भवनको सोमबार उद्घाटन भएसँगै सोही भवनबाट केही विषयगत शाखाहरुको काम शुरु गरिएको छ ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ प्रशासनिक भवनबाट काम शुरु भएपछि नगरवासीलाई प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन निर्देशन दिए । कार्यालयबाट हुने कार्यसम्पादनबाट सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको धारणा, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सबै पक्षलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए । कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति, सरकार गठनको अवस्थालगायतका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा जिल्लामा विकास निर्माणका केही विषय छुटेका भए पनि ती विषयलाई आफूले सम्बोधन गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए ।
गत असार १ गतेदेखि आएको बाढीपहिराले पु¥याएको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट नगरपालिकालाई रु. पाँच लाख सहयोग गरिएको भन्दै पोखरेलले स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारले पीडितलाई राहत वितरण, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणलगायतका काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाले नगरको समग्र विकासमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले मध्यविन्दुलाई विकास गर्न नगरले तयार गरेको गुरुयोजनासमेत मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा रहेका विषयको सम्बोधन गर्न उहाँले मुख्यमन्त्रीसँग मागसमेत गरेका छन् । केही वस्तुगत शाखाको काम नयाँ भवनबाट शुरु गरिएको भए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनका लागि अझ केही समय लाग्ने नगरप्रमुख रानाले बताए ।
कार्यालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर खरिदको ठेक्का प्रक्रियामा रहेको भन्दै रानाले फर्निचर खरिद भएपछि नगरपालिकाको सबै सेवा उक्त भवनबाट शुरु हुने बताए । मध्यविन्दु नगरपालिका निर्माण भएसँगै विसं २०७३ मा नै नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास भएर काम अगाडि बढेको थियो । दुई चरणमा भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।
आव २०७४र७५ मा कैलाश एण्ड कम्पनीसँग रु. एक करोड २० लाख लागत सम्झौतामा भवन निर्माणको काम भएको थियो । पुनः विसं २०७५ फागुन २२ गते बिरुवा कामाख्य उपमा जेभीसँग रु. तीन करोड ८१ लाख ७९ हजार ९३१ मा निर्माण सम्झौता गरी ठेकेदार कम्पनीले विसं २०७७ माघ २२ गते नगरपालिकालाई भवन हस्तान्तरण गरेको सूचना अधिकारी सुमनराज रेग्मीले जानकारी दिए । दुई चरणमा गरेर रु पाँच करोड दुई लाख लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको रेग्मीले बताए ।
मध्यविन्दु नगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवनसँगै सुविधासम्पन्न सभाहलसमेत निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाले पूर्णरूपमा नयाँ भवनबाट काम शुरु गरेपछि अहिले कार्यालय रहेको भवनलाई कर्मचारी आवास गृहका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको नगरप्रमुख रानाले बताए ।